Home » News na ụgbọ elu » IATA: Izu ikuku ka o ruru elu na March 2021
Ugbo ikuku na-aga n'ihu karịa ọkwa COVID (Machị 2019) na-achọ 4.4%
Onwa March ruru ọkwa kachasị elu edere kemgbe usoro malitere na 1990
Ọrụ ndị na-esighi ike site n'aka ndị Asia na Pacific na ndị Africa butere aka na uto dị nro na March
Ike zuru ụwa ọnụ, nke a tụrụ na ton-kilomita dị ibu (ACTKs), gara n'ihu ịgbake na Machị
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) weputara onwa March 2021 maka ahia ahia ikuku nke uwa n’egosiputa na ibu nke ikuku n’aga n’iru n’iru ihe kariri COVID (March 2019) na choro 4.4%. Onwa March ruru ọkwa kachasị elu edere kemgbe usoro ahụ malitere na 1990. Nchọpụta ọnwa na-arịwanye elu n'agbanyeghị na ọ dị nwayọọ karịa ọnwa gara aga na mpịakọta elu 0.4% na Machị karịa February 2021 ọkwa.
N'ihi na atụnyere dị n'etiti 2021 na 2020 nsonaazụ kwa ọnwa agbagọ site na mmetụta pụrụ iche nke COVID-19, belụsọ ma edeghị ntụnyere niile ga - eso bụ na March 2019 nke gbasoro usoro ochicho kwesiri.
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ, nke a tụrụ na ton-kilomita (CTKs) buru ibu, ruru 4.4% ma e jiri ya tụnyere Machị 2019 na 0.4% ma e jiri ya tụnyere February 2021. Nke a bụ nwayọ nwayọ karịa nke ọnwa gara aga, nke hụrụ ịrị elu chọrọ 9.2% tụnyere February. 2019. Arụ ike na-esighi ike site na Asia-Pacific na ndị na-ebugharị Afrịka ma e jiri ya tụnyere February nyere aka na uto dị nro na March.
Ike zuru ụwa ọnụ, nke a tụrụ na ton-kilomita dị arọ (ACTKs), gara n'ihu na-agbake na Machị, pasent 5.6 ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga. Na agbanyeghị nke a, ikike na-eweghachi 11.7% n'okpuru ọkwa pre-COVID-19 (Machị 2019) n'ihi nrụgide na-aga n'ihu nke ụgbọ elu ndị njem. Ndị ụgbọ elu na-anọgide na-eji ndị na-ebu ibu raara onwe ha nye nkwụnye enweghi afọ-ike dị. Ike mba dị iche iche site na ndị na-ebu ibu raara onwe ha gbagoro 20.6% na Machị 2021 ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa ahụ na 2019 na ikike ibu nke ụgbọelu njem ruru 38.4%.
Ọnọdụ akụ na ụba na-akwado ya na-akwado nkwado maka ụgbọ elu ikuku:
Egosiputara nke a na uzo ahia ohuru ohuru nke imeputa ihe nlere nke ndi isi (PMI) nke guzoro na 53.4 na March. Nsonaazụ dị n'elu 50 na-egosi uto nrụpụta na ọnwa gara aga.
Ọchịchọ maka mbupụ ga-eto nke ọma na Machị. E lekwasịrị anya na mba ndị mepere emepe na Jenụwarị na Febụwarị.
Oge nnyefe maka ngwaahịa arụpụtara na-abawanye nke na-egosipụtakarị mkpa maka ibu ụgbọ elu na mbọ iji belata oge mbupu.
Azụmaahịa ụwa bilitere 0.3% na February - nke itoolu na-agbakwunye kwa ọnwa na ogologo oge na-aga n'ihu na ihe karịrị afọ iri abụọ.
“Ibu ụgbọ na-aga n’ihu ịbụ ebe mara mma maka ụgbọelu. Ochicho ruru oge niile na March, elu 4.4% ma e jiri ya tụnyere ọkwa pre-COVID (Machị, 2019). Ndị ụgbọ elu na-emekwa ihe niile iji chọta ikike achọrọ. Nsogbu a egosila na ibu ikuku nwere ike izute nnukwu nsogbu site na ịnabata mmemme ngwa ngwa. Nke a bụ etu o si egbo mkpa na-eto eto ọbụlagodi na ọtụtụ ụgbọ mmiri ndị njem ka gbadara ala. Ndi akuku ahu kwesiri ijide nsogbu a ka ha wee mee ka oru ndi a di ogologo site na itinye digitalization, ”ka Willie Walsh, Director General nke IATA kwuru.